Praiminisitra Mahafaly Olivier : « Tsy matahotra miroso amin’ny fifidianana ny governemanta » -
AccueilRaharaham-pirenenaPraiminisitra Mahafaly Olivier : « Tsy matahotra miroso amin’ny fifidianana ny governemanta »
“Betsaka ny feo haely etsy sy eroa fa matahotra miroso amin’ny fifidianana ny governemanta. Tsia, tsy matahotra miroso amin’ny fifidianana velively ny governemanta”. io no nambaran’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier, manoloana ny tsaho mandeha fa tsy hiroso ary tsy hahavita fifidianana ny fitondrana.
Nambaran’ny praiminisitra fa mbola maromaro ny dingana tsy maintsy lalovana vao tonga any amin’ny tena atao hoe fifidianana isika. “Misy ny fangatahana avy amin’ny Komity mahaleo tena manomana ny fifidianana na Ceni, avy amin’ireo mpanao politika, avy amin’ny fiarahamonim-pirenena amin’ny hanavaozana ny lalàna rehetra mahakasika ny fifidianana”, hoy hatrany izy.
Araka izany, avy amin’izay indrindra anefa, hoy ny praiminisitra no hananganana rafitra iray na komity fakan-kevitra izay handinika ny mahakasika ny amin’ny hoe “lalàna tahaka ny inona no ilaintsika eto Madagasikara mba tsy hisian’ny krizy sy savorovoro intsony rehefa miatrika fifidianana”. Anjaran’io rafitra io kosa no manome sori-dalana mba hahafahana mametraka lalàna izay eken’ny rehetra mahakasika ny fifidianana. Noho izay indrindra no tsy mbola hirosoantsika amin’ireo fifidianana isan-tsokajiny eny anivon’ny faritra, sns. “Rehefa mipetraka izay rafitra ary manao ny asany avy eo, mbola hisy ihany koa ny komity iraisan’ireo minisitera izay hametraka ny volavolan-dalàna mahakasika ny fanatsarana ny didy aman-dalàna mikasika ny fifidianana. Voalaza fa tontosa izay rehetra izay, vao miroso amin’ireo fifidianana isan-tsokajiny isika.”
Ankoatra izay, nohazavain’ny praiminisitra ihany koa fa mba hialana amin’ny hosoka ary mba hisian’ny mangarahara sy hisian’ny fifidianana eken’ny rehetra, efa nisy ny fikaonan-doha nataon’ny Ceni teny anivon’ny faritra mba nihainoana ny feon’ny vahoaka ka ireny tolo-kevitra avy any amin’ny faritra ireny no haravona ary dinihin’ny komity fakan-kevitra hanatsarana ilay lalàna izay efa misy amin’izao fotoana izao. Nambarany fa tsy maintsy mandalo parlemanta (antenimeram-pirenena sy antenimieran-doholona) kosa ny fandaniana ny lalàm-pifidianana raha toa ka kitihina izany.